Gaalkacayo”Nin Dhallinyaro Ah Oo Qudha Ka Jaray Nin Oday Ah Oo Hooyadii Meher Qarsoodi Ah Ku Guursaday | Berberatoday.com
Gaalkacayo”Nin Dhallinyaro Ah Oo Qudha Ka Jaray Nin Oday Ah Oo Hooyadii Meher Qarsoodi Ah Ku Guursaday
Galkacayo(Berberatoday.com)-Gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya waxa ka dhacday qiso layaab leh kadib markii nin dhallinyaro ahi uu qudha ka jaray nin hoooyadii u guursaday sifo qarsoodi ah oo aanay dad badani ogayn taasi oo ka cadhaysiisay wiilka hooyadii la meher xaday kadibna uu qudha ka jaray ninkii hooyadii guursaday.
Sida ay xaqiijiyeen Warbaahinta Maxaliga ahi Nin dhalinayaro ah , ayaa ku diley nin waayeel ahaa duuleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, ka dib markii uu si qarsoodi u guursadey hooyadii oo ku mehersadey dhul baadiye ah.
Odeyga la diley oo lagu magacaabo Cabdi Dhoore ayaa waxa wiilku ku marti qaaday deegaanka Laaambaar isaga oo isaga dhigayay in uu maamuusayo ama guurka ku faraxsan yahay balse xaajadu waxa ay mar kali ah is baddashay markii wiilku la soo baxay go’aanka uu qarsanayay, waxaana uu u sheegay in uu ka xunyey masaafaynta guurka hooyadii , ka dibna halkaasi ayuu ku diley.
Maydka odayga islaanta meher xaday ayaa loo qaaday dhanka magaalada Gaalkacyo ee caasimadda Gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Gal-mudug.
Ninka dilka geystay ayaan la soo qaban illaa hadda sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaankaasi.